Global Voices teny Malagasy » Mifampihaika Amin’ny Fomba Famonoana Biby Havadika Ho Hena Ataon’ny Orinasa Ny Fitomboan’Isan’Ireo Mpitia Biby An-Trano · Global Voices teny Malagasy » Print
Mifampihaika Amin'ny Fomba Famonoana Biby Havadika Ho Hena Ataon'ny Orinasa Ny Fitomboan'Isan'Ireo Mpitia Biby An-Trano
Voadika ny 02 Jona 2016 6:50 GMT 1	 · Mpanoratra Loa Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Atsinanana, Vietnam, Fahasalamàna, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Tsidika, Zavakanto & Kolontsaina
Sarin'alika ao anaty kamiao ao Vietnam avy amin'ny Animals Asia. Sary: Flickr, CC License
Ity lahatsoratra  nasian'i Nguyễn Linh Chi fanovana ity dia avy amin'ny Loa, tranonkalam-baovao tsy miankina sy mpandefa tantara am-peo momba an'i Vietnam, ary navoaka ato amin'ny Global Voices indray noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
“Ohatrinona ny alika kely ao amin'ny varavarankely?” Izany no lohatenin-kira sy fangatahana ilay hira malaza napetrak'i Patty Page hitoetra mandrakizay tamin'ny taona 1950, ary ny mety ho valintenin'i Mai Anh, 26 taona dia: sivy tapitrisa đồng, 400 dolara Amerikana eo ho eo.
đồng be loatra izany raha ividianana alika iray, ao amin'ny firenena izay eo amin'ny 220 dolara Amerikana eo ny karama isam-bolana.
Mpampianatra monina ao Hà Nội, renivohitr'i Vietnam i Anh. Nomeny anarana hoe Bach Bach, midika hoe fotsy amin'ny teny Vietnamiana ny alika keliny, bolidaogy anglisy fotsifotsy toy ny oram-panala
I am willing to spend money because I really like this breed of dog. I got my puppy online. All white English bulldogs are very rare in Việt Nam. Luxury dogs in Việt Nam go anywhere from a couple million đồng to hundreds of million đồng.
Vonona handany vola aho satria tena tiako ity karazan'alika ity. Nahazo ny alika keliko tamin'ny alalan'ny aterineto aho. Vitsy dia vitsy ny bolildaogy Anglisy fotsy ao Việt Nam. Mandehandeha eny rehetra eny manomboka amin'ny vidiny đồng an-tapitrisany ka hatramin'ny đồng an-jatony tapitrisa ny alika mihaja ao Viêt Nam.
Anisan'ny sarangan'olona antonony miha-maro isa ao Việt Nam i Anh, ny alika lafo vidy sy nohafarana no zavatra novidian'izy ireo farany. Fomba iray hoan'ity tanora tia mivoatra ity ary fahasahia-manonofy hanehoana tsiro sy sata ara-tsosialy izany. Nanampy an'i Việt Nam ho lasa tia biby fiompy bebe kokoa ny zava-misy, ary noho ny fiakaran'ny fari-piainana, mitombo ny orinasan'ny biby fanao an-trano, velomin'ny tinadin’ entana sy tolotra tsara ho an'ny biby fiompy.
Araka ny filazan'ny Digi-escape, orinasa mpamoaka boky momba ny biby fanao an-trano miorina ao Sai Gòn, nisokatra tao tamin'ny taona 2006 ny fivarotam-biby fanao an-trano voalohany. Folo taona tatỳ aoriana, efa maherin'ny 76 ankehitriny ireo fivarotam-biby fanao an-trano sy toeram-pitsaboana biby manerana ny tanàna.
Manoratra ny Digi-escape fa mbola “kely, mizarazara sy an-dalam-pandrosoana kanefa manana fahafahana handroso tsara” ny tsenan'ny zavatra rehetra be volombolony.
Na izany aza, aza diso hevitra momba izany. Saro-toerana ny alika ao Việt Nam: Mety ho lasa biby fanao an-trano tian'ny olona fatratra izy kanefa koa mety ho lasa sakafo ankafizin'ny olona fatratra ao anatin'ny indray mipi-maso koa.
Manomboka amin'ny: “Hiran'ny Henan'Alika” (na “Bài Ca Thịt Cho”) an'i Nguyễn Hai Phong hatramin'ilay hira rap mitondra ny lohateny hoe “Trộm Cho” (na “Mangalatra Alika”) an'i Nam Lee, manazava ny hira maromaro fa azo andrahoina na samborina ny alika.
Saingy nahazo fitiavana avy amin'ireo mpitia biby fanao an-trano manerana ny tranonkala noho ny fitsinjovana ny maha-olona, na dia somary hafatra manonofinofy aza ny hira malaza vao haingana tao amin'ny YouTube “Thịt Cho Không Ngôn đầu”, midika hoe “Tsy Misy Tsara Amin'ny Henan'Alika” notontosain'ilay mpanakanto Huy Joo. Nalain-tahaka tamin'ilay hiram-pitiavana malaza “Giu Em đi” ny hira. Notazomin'i Huy Joo ny gadona manaitra orizinaly, raha nasiam-panovana kosa ny tononkira mba hitaky fanajanonana ny fihinanana henan'alika.
“Mahatsiaro hatrany ny alikakeliko aho, nilalao tany ivelany izy raha nisy nisambotra. Ary nivoady tsy hikasika mandrakizay ity sakafo matsiro ity intsony aho, satria tiako loatra ny alika,” hoy ny hirany.
Satria mitombo ireo mpiomby biby fanao an-trano, mazava ho azy ny olana amin'ny fihinanana henan'alika. Iadian-kevitra mafana manerantany ny etika amin'ny fihinanan-kena. Saingy ny fikarakarana ireo biby (alika) ireo no tena mampitombo ny lakolosy fanairana.
Misy ny angano fa arakaraky ny fanaintainana hijalian'ny biby alohan'ny hamonoana azy no mampatsiro kokoa ny hena. Misy ireo toeram-pisakafoanana manantona alika, avy eo midaroka kibay hahafaty azy mba hahabetsaka kokoa ny tahotra.
Ny fomba famonoana alika dia ahitana ny rehetra manomboka amin'ny fandorana amin'ny herinaratra, fadorana amin'ny afo, tsindron'antsy amin'ny tratra hatramin'ny fanakendana. Zavamisy mahazo ny alika maro ao Viêt Nam ny manjò mampivarahontsana azo an-tsaina avy amin'ny sarimihetsika mampihorohoro. Tsy misy ny porofo azo aseho fa noho ny fitadiavana kalitaon'ny hena no mahatonga ny fomba feno herisetra amin'ny famonoana biby, saingy mahavaky fo ny mijery ity fomba fanao tsy mifaditrovana ity.
Araka ny filazan'ny Asia Canine Protection Alliance (Firaisamben'ny Fiarovana Alika ao Azia) , alika eo amin'ny dimy tapitrisa eo no maty isan-taona atao hena ao Việt Nam. Mametraka ity firenena kely atsimo atsinanana ity ho faharoa amin'ny lisitry ny firenena Aziatika mihinana henan'alika, aorian'i Shina, izany tarehimarika izany.
Ary tsy ny alika ihany no hanina ao Việt Nam. Heverina ho sakafo ao amin'ny faritra maro ao amin'ny firenena ihany koa ny saka. Na dia tsy ara-dalàna aza ny mihinana saka, mbola marobe ireo trano fisakafoanana mahandro saka ao avaratra. Manonona ny tompon'ny trano fisakafoanana iray miorina ao amin'ny faritany Bắc Ninh ao Vietanm ny tantara ao amin'ny Gazetiboky South China Morning Post, milaza hoe:
Everybody wants to eat cat now – it is more delicious and exotic than other kinds of meat, and some people are superstitious and eat it to bring them strength and good fortune.
Te hihinana saka ny olona rehetra ankehitriny – matsiro kokoa sy hafakely noho ny karazan-kena hafa izy, ary minomino foana ny olona sasany ka mihinana azy mba hitondra hery sy harena ho azy ireo izany.
Somary mahatsikaiky, nilaza ihany koa ny mpikarakara sakafo fa mpanjifa mahafatra-po ao amin'ny trano fisakafoanana ny mpisolovava, ny polisy ary ny mpanankarena.
Hampanano-sarotra tanteraka ny fanafahana ny olona amin'ny tsiron'ny henan'alika ny fitambaran'ny fomban-drazana sy ny finoana fa mitondra vintana tsara sy fanao ara-tsosialy ny fihinanana henan'alika .
Na dia eo aza ireo zava-tsarotra, mitombo haingana ny fikambanana miaro ny zon'ny biby ao Việt Nam. Nanjary niloa-peo tsy amin'ny fanoherana ny fihinanana henan'alika sy saka ihany ny mpikatroka fa amin'ny fanoherana ny olana lehibe mikasika ny habibiana atao amin'ny biby ihany koa.
Milaza i Catherine Besch, iray amin'ireo mpiara-manorina ny Fikambanana Ho amin'ny Mahasoa ny Biby ao Vietnam (VAWO)  ao Hội An, ao afovoan'i Việt Nam, fa iray amin'ireo olana lehibe indrindra ny fanabeazana. Anisan'ireo tanora marobe miaro biby izay mazoto miasa hahatonga an'i Việt Nam ho toerana naman'ny biby kokoa ny VAWO.
Nilaza izy fa misy ny filàna hisian'ny ezaka fiarahamiasa eo amin'ny fikambanana mpiaro ny zon'ny biby mba hampisy lalàna mahasoa ny biby ao Việt Nam:
To get a grassroot social activism movement going in a country where people are into it but they don’t know what to do, two steps are needed. Step one: Love animal. Step two: [People say] I don’t know what to do now. The idea is to try to figure out how to bind them together and give them step by step results-based tasks so everyone knows what to do next. Get on the same page. If we are separate, we are a whisper. If we are together, we are a roar. We can make a voice so much stronger in that country..
Mba hampisy hetsika fikatrohana ara-tsosialy eny ifotony ao amin'ny firenena izay misy ny olona manohana saingy tsy mahalala izay tokony hatao, misy dingana roa ilaina. Dingana voalohany: Tiavo ny biby. Dingana faharoa: [Hoy ny olona:] Tsy fantatro izay tokony hatao ankehitriny. Ny hevitra dia miezaka mamantatra ny fomba hampitambatra azy ireo ary manome azy ireo tsikelikely ny raharaha mifototra amin'ny vokatra hahatonga ny tsirairay hahafantatra ny tokony atao avy eo. Mandehana ao amin'ny pejy ihany. Raha misaraka isika, dia bitsika izahay. Raha miaraka isika, dia trerona izahay. Afaka miloa-peo mafy kokoa isika ao amin'izany firenena izany.
Tian'ny Besch ny fiarahamonina sy ny rafitra ara-pitsarana mba hikarakara ny biby, hoy izy, fa tsy voatery ny mpamonjy voina foana. Nofy nandritra ny taona maro sy taona maro amin'ny hoavy izany, saingy tanjona iasan'izy ireo miaraka, hoy izy nanampy.
Ny taranaka vaovao mpankafy biby fanao an-trano mahita ny biby ho namana no ho hery mitarika hanohitra ny habibiana atao amin'ny biby ao Việt Nam ary hampihena ny tinadin'ny henan'alika na saka. Mbola lavitra i Việt Nam vao ho lasa firenena azo antoka sy namana ho an'ny biby fanao an-trano, saingy efa mitranga ny fiovana.
Henoy ny fandraisam-peo momba ny firoaroan-tsaina amin'ny fihinanana henan'alika ao Vietnam:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/06/02/83373/
 karama : http://www.tradingeconomics.com/vietnam/wages
 nisokatra : http://petsvietnam.com/intro-pet-industry-vietnam/
 Asia Canine Protection Alliance (Firaisamben'ny Fiarovana Alika ao Azia): http://www.acpagroup.org/
 tantara : http://www.scmp.com/magazines/post-magazine/article/1815665/cruel-trade-flourishing-cat-meat-restaurants-north-vietnam
 Fikambanana Ho amin'ny Mahasoa ny Biby ao Vietnam (VAWO): http://vnanimalwelfare.org/